काबुलीवाला- रविन्द्रनाथ ठाकुर - साहित्य नेपालसाहित्य नेपाल काबुलीवाला- रविन्द्रनाथ ठाकुर - साहित्य नेपाल
नमिलेका फोहोर लुगा लगाएको, टाउकोमा पगडी बाँधेको, काँधमा झोला झुण्ड्याएर र हातमा अंगूरको दुई–चार पिटारी लिएर एउटा अग्लो काबुली सुस्त चालमा सडकमा हिंडिरहेको थियो । उसलाई देखेर मेरी छोरीको मनमा कस्तो भावना जाग्यो होला, यो भन्न मुश्किल छ तर उनी जोड–जोडले बोलाइरहेकी थिइन् । मैले सोचें, काँधमा झोला भिरेर अब एउटा आपत मेरो टाउकोमा सवार हुनेछ र मेरो सत्रौं अध्याय समाप्त हुन पाउने छैन । तर मिनीले बोलाएको सुनेर जब काबुलीले हाँसेर आफ्नो अनुहार घुमायो र मेरो घरतिर आउन थाल्यो, तब मिनी हतार हतार भएभरको शक्ति लगाएर भित्रतिर दगुरिन् र बेपत्ता भइन् । उनको मनमा एक प्रकारको अन्धविश्वास भरिएको थियो कि त्यो काबुलीको झोलामा मिनी जस्ता दुई–चार जीवित बच्चा भेटिन सक्छन् ।
मिनीकी आमा बडा शंकालु स्वभावकी छिन् । बाटोमा कुनै आहट हुने वित्तिकै उनलाई लाग्थ्यो कि दुनियाँभरका जड्याहा मातेर हाम्रो घरतिर दौडदै आइरहेका छन् । यो दुनियाँ हरेक ठाउँ चोर–डाकू, जड्याहा, सर्प, बाघ, भालु, मलेरिया, सुँघुर, ब्वाँसो र गोरोले भरिएको हुन्छ भन्ने उनको विचार छ । यतिका दिनदेखि (जबकि धेरै दिन भएकै छैन) दुनियाँमा बसेर पनि उनको मनबाट यो डर हटेको छैन । खासगरी रहमान काबुलीको बारेमा उनी पूर्ण रुपमा निश्चिन्त थिइनन् । उनमा खास नजर राख्नको लागि उनी बारम्बार मसँग अनुरोध गर्थिन् । म उनको शंकालाई हाँसोमा उडाउने कोसिस गर्थें, तब उनी मसँग एक–एक गर्दै अनेक प्रश्न सोध्थिन्, “के कहिल्यै कसैको छोराछोरी चोरी भएको छैन ? के काबुलमा गुलामी–प्रथा चलेको छैन ? एक बलियो बाङ्गो काबुलीलाई एउटा सानो बच्चा चोरेर लान के बिल्कुलै असंभव छ ?”
अनुवाद : विनिता पौडेल
112 Readers have read this post.
मेरी लुखुरी - मन पौडेल